Egypt - omunye izindawo ethandwa kakhulu phakathi izivakashi Russian. Lokhu ashisayo ezweni Arab unikeza ezihlukahlukene zokungcebeleka nokuzijabulisa. Amahhotela abaningi kungenziwa ngokudida hhayi kuphela izivakashi abajwayelekile, kodwa ngisho okhokhelwayo. Ukuze ulahleke ingxubevange egqamile amagama, ungakwazi sinake kuphela ezindaweni ezithakazelisayo kakhulu - Ali Baba Ihhotela Hurghada, eyodwa vó yalezi zindawo.
indawo ekahle kakhulu Ali Baba Ihhotela Hurghada - eziyishumi nje ukusuka esikhumulweni sezindiza. Shuttle ine omuhle kakhulu - esikhulu ukuvakasha amabhasi ukushayela up beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni ngqo isakhiwo main edilini lomshado - 4 * isimo uphoqa ukugcina sha.
Ihhotela, kodwa eyinkimbinkimbi ezimbili ezincane, ezintathu storey izakhiwo etholakala ogwini loLwandle Olubomvu encwadini edumile waseGibhithe resort emzini Hurghada. Njengezinye izikhungo eziningi izivakashi, Ali Baba - idolobha langempela ngaphakathi edolobheni, lapho ungathola ukuzijabulisa for wonke akuthandayo: zokudla, nemishayo, amachibi okubhukuda, izitolo, ubuhle salon, kukhona ngisho nightclub ayo! Kukhona playroom yezingane nokuzijabulisa zezingane ukuthi izingane musa ngizithola kuyilapho abazali bazo ukujabulela iholidi eside elindelwe.
amakamelo Cosy double ngeke ivumelane umbhangqwana osemusha noma umkhaya onezingane ezincane - egumbini, ngaphandle lowo kabili noma ezimbili imibhede olulodwa, kukhona usofa ezincane, okungase ukubola kanye liphendulwe Embhedeni owenezelwe. Cishe zonke amakamelo isigaba ejwayelekile, kodwa kukhona Suites, umkhaya omkhulu noma inkampani bayokwazisa amakamelo eduze, ahlukaniswe umnyango. Amagumbi zitholakala esitezi sokuqala ukukhetha ezimbili - esikhundleni balcony emhlabeni azungezwe yokwakha ngamunye ithala, okuyinto lungatholakala ngomnyango yesibili.
Ukunikezwa Ihhotela Ali Baba Hurghada nothandekayo ngakho yizivakashi eziningi sokuyokhonza zonke okufakayo - lezitsha langa for kwasekuseni, kwasemini kanye dinner kwahambisana khulula iziphuzo ezibandayo yonke ukunambitheka, itiye, ikhofi, iwayini zendawo imimoya etholakalayo usuku lonke kuzo zonke Amabha hhotela. Zonke amaholide usuku ubungazwa ezihlekisayo Animators, futhi ngesikhathi ilanga lishona bona esikhundleni amahle esiswini abadansi.
Beautiful ehhotela libuyekeza Ali Baba e Hurghada kusuka izivakashi eziningi kangaka ngokuvakashela khona ezivela emhlabeni wonke, kuyinto intela kwabase-service omuhle kanye nabasebenzi safundiswa. Lapha, konke subordinated ukudala iphupho zeholide ukuthi akugcini nje zikhunjulwe iminyaka eminingi, kodwa futhi kwenza iphupho ukubuyela lapha inganekwane.
Isakhiwo ine okubhukuda amathathu, elinye libe izingane, enye ikhona egumbini, kodwa Chic kakhulu - yesithathu ubude pool kuka 150 metres, Ukushisa - ke ichibi enkulu e Hurghada! Kwenzeka isimanga, lesi isikhala khulula ngasechibini incane, kodwa nje ungakwazi nokujikijela itshe lifike ezinomsindo efudumele oLwandle Olubomvu. Ibhishi ehhotela efanele: sandy, ehlanzekile - okubaluleke - mahhala, ikakhulukazi uma ukuba kwenzeke ekuseni. Omatilasi, imibhede nezambulela - konke mahhala! Ngemva ranta okudliwa bayokujabulela ukwenza ezemidlalo: ithenisi, i-volleyball yasolwandle, diving noma uqhubeke ukuphumula elinganisiwe umdlalo we amabhiliyade.
Egypt Ali Baba Ihhotela Hurghada - la mazwi nangokwawo pyshut ehlane sandy ukushisa, kodwa budebuduze naleli amanzi nolwandle aluhlaza ukudala cool ezimnandi ngisho ngosuku ezishisayo. Exotic dethi tende nezihlahla nge izimbali elimnandi, utshani ephelele - kunzima ukukholelwa ukuthi ngaphandle nje ehlane, mhlawumbe nje Cacti ambalwa zifane wakhe.
amasevisi abo izivakashi linikeza hhayi kuphela Ihhotela Ali Baba Hurghada - kuyinto resort ezinkulu ethandwa, lapho noma iyiphi holidaymaker angabheka amahhotela eziseduze noma ukubhuka uhambo bonke izinto Egypt noma Olufile kwa-Israyeli.
Nicotera Beach Village 4 * (Italy / Calabria) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa